Umsebenzi KaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe II | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Ngokunika u-Abrahama indodana, amazwi uNkulunkulu ayewakhulume ku-Abrahama agcwaliseka. Lokho akusho ukuthi icebo likaNkulunkulu laphelela lapha; ngokuphambene, icebo elimangalisayo likaNkulunkulu lokuqondisa nensindiso yesintu kwakusanda kuqala, futhi isibusiso Sakhe sendodana asinika u-Abrahama sasiyisiqalo sawo wonke umsebenzi Wakhe wecebo lokuqondisa. Ngaleso sikhathi, owayazi ukuthi impi kaNkulunkulu noSathane yayisanda kuqala ngesikhathi u-Abrahama enikela ngo-Isaka?
Okwedlule：Umsebenzi kaNkulunkulu, Isimo SikaNkulunkulu, kanye NoNkulunkulu Uqobo Lwakhe III